Ahoana ny fanovana ny safidy fidirana ho an'ny fampiharana ao amin'ny iOS 15 | Vaovao IPhone
Ny rafitra fiasan'ny Apple dia niavaka foana noho ny fahaizany mampiavaka azy endri-javatra azo idirana. Ny fahazoana antoka fa ireo olona manana fahasembanana dia afaka mankafy ny traikefa iray manontolo dia lakilen'ny fanatanterahana ny fahafaham-po tadiavina avy amin'i Cupertino. Fanavaozana aorian'ny fanavaozana, misy safidy vaovao entina manatsara ny fahazoana miditra amin'ny rafitra miasa. Raha ny tena izy, iOS 15 dia manolotra ny fametrahana ny safidin'ny fidirana ho an'ny rindranasa. Izany hoe, azo atao ny manamboatra ny toetran'ny fampiharana tsirairay, tsirairay, mba hialana amin'ny fanaingoana manerantany izay tsy dia tsara loatra ho an'ny fampiharana rehetra. Atorinay anao ny fomba hampiasana ity asa ity.
Ampifanaraho amin'ny fampiharana ao amin'ny iOS 15 ny fampiharana safidy azo idirana
Ny asan'ny Accessibility maro izy ireo ary samy hafa be. Na izany aza, ny tena manan-danja indrindra dia ireo mamela anao hanamboatra ny fomba fisehoan'ny efijery, ny lahatsoratra ary ny hetsika manerana ny rafitra fandidiana. Ny ambiny amin'ireo fiasa dia add-on izay ampiana amin'ny rafitra ahafahan'ny fidirana amin'ny rafitra fiasa miasa araka izay tratra. Ny fisian'ny kilema marobe amin'ny ambaratonga samihafa na ny tsirony aza rehefa mijery atiny dia manandanja ireo safidy ireo.
Ny iOS 15 dia ahitana ny safidy hanamboarana ny rindranasa azo idirana amin'ny alàlan'ny fampiharana, ny tampon'ny fampanjariana amin'io lafiny io. Raha te hiditra amin'ilay fitaovana dia ilaina ny manana beta an'ny iOS 15 na ho an'ny developer na ny beta ho an'ny daholobe satria izy rehetra dia mampiditra an'ity zava-baovao ity. Manaraka izany, hiditra amin'ny sehatry ny setting> Accessibility isika ary amin'ny faritra General dia ho hitantsika ny safidy Fikirana isaky ny fampiharana.
Ny tranonkala Apple Accessibility vaovao dia mampiseho ny tombony azo amin'ny iOS sy iPadOS
Raha vantany vao tafiditra ao anatiny isika dia afaka manampy rindranasa maro araka izay tadiavintsika. Raha tsindrio azy ireo isika dia hitantsika ny safidy rehetra azontsika ampifanarahana, toy izao: lahatsoratra sahisahy, fifehezana ny sisiny, fivadihan-doko, fitomboan'ny fifanoherana, avahana tsy misy loko, fihodinam-pahaizana, fampihenana ny hetsika ary maro hafa.
Rehefa manao ny fanovana izahay dia hampavitrika isaky ny fampiharana izay novainay. Raha hamafa ny fanahafana dia miverena fotsiny amin'ny menio izay fisehoan'ireto fampiharana ireto ary kitiho ny ankavia izay tianao hamafa ary kitiho ny bokotra Delete.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ahoana ny fanovana ny safidy fidirana ho an'ny fampiharana ao amin'ny iOS 15
Fanavaozana ho an'ny iPhone, Apple Watch, HomePod ary Apple TV Azo alaina izao